काठमाण्डौं, चैत्र २०, २०७० । सन्राइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक बर्ष २०६९/७० को मुनाफाबाट ११ प्रतिशत बोनस शेयर तथा सो को कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पुँजीको ०.५७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेकोमा मिति २०७० चैत्र १७ गते बसेको बैंकको संचालक समितिको वैठकबाट बोनस शेयर जारि भई कायम भएको पूँजीको १० Ü अर्थात प्रत्येक १० कित्ता शेयर बराबर १ कित्ताका दरले पुन : हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने प्रस्ताव समेत आगामी बार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त वोनश शेयर तथा हकप्रद शेयर आगामीे बार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि निस्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ ।
हाल बैंकको निक्षेप रु. २६ अर्ब ६४ करोड भन्दा बढी, कर्जा लगानी रु. २१ अर्ब २८ करोड भन्दा बढी, ग्राहक संख्या २ लाख ३० हजार भन्दा बढी तथा चुक्ता पूँजी रु. २ अर्ब १ करोड ५० लाख रहेको छ । बैंकको हाल शाखाहरुको संख्या ५१ र ए=टि=एम को संख्या ६१ पुगेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यका भित्र २२ शाखाहरु र उपत्यका बाहिर २९ शाखाहरु रहेका छन् । बैंकले सन्राइज सेफ डिपोजिट लकर सुविधा, भिसाडेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, रेमिट्यान्स लगायत आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।